Hordhac: Kulanka Aston Villa Vs Chelsea Ee Horyaalka Premier League, Blues Oo Qasab Ku Tahay Badinta Kulankan
HomeWararka CiyaarahaHordhac: Kulanka Aston Villa Vs Chelsea ee Horyaalka Premier League, Blues oo qasab ku tahay badinta kulankan
May 23, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Ingiriiska 0
kooxda Chelsea ayaa booqasho ugu tageyso kooxda Aston Villa kulanka ugu danbeeyay ee horyaalka Premier Leagu, Blues waxaa qasab ku ah badinta kulankan si ay sanadkan danbe ugu qeyb gasho Champions league.
Saacada 18:00 pm Waqtiga Somaliya
Garoonka Villa Park
Kooxda martida loo yahay ayaa weli ka maqan adeegyada Matty Cash (muruqa), Dominic Revan (daanka), Trezeguet (jilibka) iyo Morgan Sanson (jilibka) dhaawacyo awgood. Ross Barkley ma awoodi doono inuu wajaho naadigiisa Chelsea oo amaah ku soo fasaxday.
Dhaawac : Matty Cash, Dominic Revan, Trezeguet, Morgan Sanson
Lama heli karo: Ross Barkley
Ngolo Kante (muruqa), Kai Havertz (muruqa) iyo Andreas Christensen (muruqa) ayaa shaki weyn ku jira ciyaarta madaama ay dhaawacyo soo gaareen.
Dhaawac : Ngolo Kante, Kai Havertz, Andreas Christensen
Shaxda Macquulka ee Kulankan
Chelsea ayaa kulankaan ciyaareysa iyadoo badisay 64 guul 156 kulan oo ay la ciyaareen Aston Villa.
Kooxda martida loo yahay ayaa heshay 57 guul, halka 35 kulan ay ku dhamaadeen barbaro.
Chelsea ayaan laga badinin todobadii kulan ee ugu danbeysay ee ay la ciyaareen kooxda martida loo ahaa.
Kulankoodii ugu dambeeyay wuxuu dhacay bishii Diseembar, markii labada dhinac ay ku heshiiyeen barbaro 1-1 ah garoonka Stamford Bridge.